Wada-hadlisiinta siyaasiyiinta Laas-Caanood iyo Buuhoodle. – Radio Daljir
Nin baa laga hayaa ? dadka aan taariikhda waxba ka korodhsan, gefefkii hore ayay mar kale sameeyaan.? Waa murti wax badan tari karta abaabulayaasha shirka London ka dhacay(a) bisha Abriil ( 2011) oo ay abaabuleen indheer-garad doonaya ?in la soo afjaro dhibaatooyinka siyaasadeed iyo kuwa nabadgalyo sida gaarka u saameeyay qabiilka Dhulbahantaha.?
Xarunta maamul ee gobolka Sool, Laas Canood,waa magaalo horumar wayn gaadhay intii u dhexeysay sanadihii 1991kii ,markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay dhacday iyo sanadkii 1998kii markii la sameeyay maammul-goboleedka Buntland (Puntland). Magaalada Buuhoodle oo ah xarunta gobolka Cayn, kase mid ah degmooyinka gobolka Togdheer marka la tixgeliyo 18kii gobol ka hor burburkii dowladdii dhexe, waxay samaysay horumar badan dhinaca adeegyada bulshada,waxbarashada iyo ganacsiyada kala duwan.Horumarkaas waxa keenay dadka ku nool gobollada oo aan kaashan ama wax ka sugin siyaasi ama maamul. Waa siyaasiyiinta beesha aan kor ku xusay kuwa keenay in Laas Caanood noqoto mid dagaal filanaysa laga soo bilaabo bishii Oktoobar 2004tii.
Buuhoodle ayaa ku biirtay magaalooyinka colaaddu dul hoganayso. Dadka aan waraystay badankood kuna nool LaasCaanood iyo Buuhoodle waxay ii sheegeen in welwelkooda ugu wayn uu la xidhiidho siyaasiyiinta marba maamul ku biira ama dhaq-dhaqaaq hor leh oo siyaasadeed sameeya. Caddaynta doodda dadka aan waraystay ay i la wadaageen waa tirada siyaasiyiinta Buntland ama Somaliland ka tirsanaa haddase ku biiray maamul ama dhaq-dhaqaaq ka horjeeda wixii ay taageeri jireen markii hore ?iyagoo ku hadlaya magaca beesha?. Seddex koox siyaasadeed baa ku loollamaya aayaha beesha Dhulbahanate:koox taageersan Somaliland; koox taageersan Buntland; iyo koox taageersan madax-bannaanida siyaasadeed ee beesha.Kooxdan dambe waxay berigii hore taageersanayd Buntland.
Ismaqalka iyo wada-tashiga Dhulbahante wuxuu heerkii ugu fiicnaa gaadhay inta aan la samayn maamulka Buntland iyo intaysan qaybo ka mid ah beeshu bah-wadaag siyaasadeed la noqon maamulka Somaliland. Tani macnaheedu may aha dhibta siyaasadeed maanta taagan waxa keenay maamul-xumada Buntland iyo Somaliland. Dhibta waxay,qay ahaan, ka timid dadka Laas Caanood iyo Buuhoodle ku nool oo garan la? in harumarka degmooyinkoodu ka dhashay dadaalkooda iyo maal-gelintooda ; kama uusan iman waxqabadka siyaasiyiinta Buntland Somaliland ama kuwa madax-bannaanida siyaasadeed ee beesha taageersan.
Laba su?aalood ayaan weyddiiyay soddon qof oo Laas Canood,Taleex, Buuhoodle,Boocame iyo Yagoori ku nool: side loo wada-hadlisiin karaa siyaasiyiinta kooxaha ku loollamaya aayaha siyaasadeed ee beesha Dhulbahante? Haddii lagu guuleysto wada-hadlisiinta seddexda kooxood,ma hab beeleed bay u wada-hadlayaan mise hab-maamul?
Marka laga reebo laba qof, siddeed iyo labaatan qof ayaa i siiyay warcelin isku mid ah: seddexda kooxood ha u wada-hadleen hab beeleed. Warcelinta weyddiinta koowaad lama hayo; wacerlinta weyddiinta labaadse dood bay dhalisay.